यी ४ राशीका युवतीले पुरुषलाई सहजै आकर्षित गर्न सक्छन् | यी ४ राशीका युवतीले पुरुषलाई सहजै आकर्षित गर्न सक्छन् |
यी ४ राशीका युवतीले पुरुषलाई सहजै आकर्षित गर्न सक्छन्
उज्यालो प्रतिनिधि १४ माघ २०७६, मंगलवार शिक्षा
काठमाडौँ । हरेक ब्यक्ति आफ्नो गुणबाट अरुलाई आर्कषित गर्न चाहान्छ । आफ्नो गुणले आर्कषित गर्न नसक्नेहरु पनि आफूमा भएको क्षमताले अरुलाई आर्कषित गर्न चाहान्छन् ।ज्योतिषशास्त्र अनुसार केही राशीका युवतिहरुमा अरुलाई आर्कषित गर्न कुनै गुण वा क्षमता आवश्यक पर्दैन । यी राशिका युवतीमा कुनै गुण, क्षमता वा सुन्दरता बिना नै सहजै अरुलाई आर्कषित गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ । यी निम्न राशिका युवतीले अरुलाई सहजै आकर्षित गर्न सक्छन्-
१. मिथुन राशी
मिथुन राशि भएका युवतीहरुमा अन्य राशिका ब्यक्ति भन्दा तुलनात्मक रुपमा पुरुषलाई आर्कषित गर्न सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छन् । यी राशिका युवतीको तुलना अप्सरासंग हुने गर्दछ । अप्सरा राग भएका ब्यक्तिले जोकोहीलाई सहजै आफूतिर आकर्षित गर्न सक्छन् । सुन्दरता नभएको अवस्थामा पनि पुरुषलाई आफूतिर आकर्षित गर्न मिथुन राशिका युवतीमा थुप्रै गुण हुने गर्दछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... चाणक्यका यी कालजयी शिक्षा, जसले फेर्न सक्छ तपाईको जीवनदृष्टि
वृष राशि भएका युवतीहरुलाई सुन्दरताले कुनै असर गर्दैन । आफूमा रुपरंग नभएपनि अरुको मन आफूतिर आर्कषित गर्न यी राशिका युवती शक्तिशाली मानिन्छन् । वृष राशिका युवतीलाई सुन्दर देवीसंग तुलना गरिन्छ । कोही पुरुषको सामु वृष राशिका युवति पुगे उनीहरु केहीबेरमा नै आर्कषित पार्न सक्छन् । अझ वृष राशिका युवती आसपासका व्यक्तिमाथि सजिलै जित निकाल्न सक्ने र आफ्नो अधिकार जमाउने सक्ने शक्ति हुन्छ । यि राशिका युवतिका कुरा पुरुषहरुले काट्न सक्दैनन् ।
३. वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि भएका युवतीहरु आफूले चाहेका पुरुषलाई आर्कषित गर्न शक्ति सम्पन्न हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो वर्चश्व राख्न वा प्रभाव छाड्न निकै माहिर हुन्छन् । उनीहरुमा पुरुषलाई आर्कषित गर्न सुन्दरता वा कुनै क्षमता चाहिँदैन । वृश्चिक राशिका युवतिले आफ्नो हेराई र बोलीबाट अरुलाई प्रभाव पार्न सक्दछन् । अधिकांश छोटो समयावधिमा भेटिएका प्रायः पुरुषहरु वृश्चिक राशि भएका युवतीसंग स्वतः आर्कषित हुने गर्दछन् । उनीहरुको अनुहार र आ“खामा नै एक प्रकारको सम्मोहन झै शक्ति हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... कोभिड–१९ : मदरसा शिक्षा मूलप्रवाहीकरणको चुनौती
४. मीन राशी
मिन राशि भएका युवतीहरुसँग प्राय पुरुषहरु छिट्ट प्रेममा पर्ने गर्दछन् । मिन राशिका युवतिको रोमान्टिक बानीले पुरुषलाई छिटो आर्कषित गर्दछ । यी राशिका युवतीका प्रेममा पर्ने पुरुषहरु उनीहरुको अनुहार वा ब्यवहार भन्दा पनि उनिहरुको बोलिले आर्कषित हुने गर्दछन् । मीन राशिका युवतीमा हुने सबैभन्दा ठुलो गुण भनेको उनीहरुको मिलनसार ब्यवहार हो जसले पुरुष आर्कषित गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका राख्दछ ।